Ike nke Mgbasa Ozi Onwe Onye | Martech Zone
Ike nke Ahịa Nkeonwe
Na Tọzdee, Septemba 17, 2013 Sunday, October 4, 2015 Kyle Christensen
Cheta mgbe Nike webatara mgbasa ozi Just Do It? Nike nwere ike nweta oke omuma ihe omuma na otutu okwu a di mfe. Billboards, TV, radio, print… 'Just Do It' na Nike swoosh juru ebe niile. Ọ bụ mmadụ ole Nike nwere ike ihu ma nụ ozi ahụ zitere ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi ahụ. Ndị otu nnukwu ụdị eji ụdịrị usoro a eme ihe n'oge azụmaahịa ma ọ bụ 'oge mkpọsa' yana nke ukwuu ọ masịrị ndị na-azụ ahịa ma mee ka ahịa baa ha. Mass ahịa rụrụ ọrụ.
Ngwa ngwa ngwa ihe dịka afọ 30, banye na Internetntanetị, ekwentị mkpanaaka na mgbasa ozi mmekọrịta, na anyị na-ebi n'ọgbọ dị nnọọ iche. Dị ka ihe atụ, ndị mmadụ nọrọ Ijeri $ 25 na ịzụrụ site na ekwentị na mbadamba na 2012 naanị, Emeghere 41% nke email na ngwaọrụ mkpanaka na onye na-emefu mmadụ na-emefu awa isii kwa ọnwa na Facebook. Teknụzụ dijitalụ dị mkpa na ndụ ndị ahịa yana nke a, ndị ahịa chọrọ karịa site na mmekọrịta ha na ụdị. Ha choro inu ahia site na aka nri, n’oge kwesiri ya na ozi di nkpa. Iji kwado nke a, a na-adịbeghị anya Responsys n'ji nnyocha e mere ahụ ihe ndị a:
Ọchịchọ na-arịwanye elu nke inwekwu mmekọrịta onwe onye na ụdị agbanweela egwuregwu ahụ maka ndị na-ere ahịa. Ọ na-ewe ọkaibe nkà na ụzụ na smarts ịzụlite ogologo oge mmekọrịta ndị ahịa na mmetụta na ala akara. Taa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnapụta ahụmịhe nkeonwe maka ndị ahịa gafee ọtụtụ dijitalụ dijitalụ - yana n'ọtụtụ buru ibu.
MetLife bụ nnukwu ihe atụ. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa na-aga eleta webụsaịtị nke MetLife iji jụọ maka amụma mkpuchi, n’azụ usoro, ha abanyela na mmemme ahaziri iche nke ahaziri iche iji nyere ndị na-azụ ahịa aka mezue usoro mgbagwoju anya nke oge. Ọ na-amalite na saịtị Weebụ, mana enwere ike ịga n'ihu site na email, ngosipụta na SMS maka ọkwa na arịrịọ ntinye. Na ụzọ, ozi a na - ahaziri ndị ahịa nke ọ bụla. Emechara nke ọma, mmemme a na - eweta ọmarịcha ahụmịhe ndị ahịa, ebe ọ na - agba ndị na - azụ ahịa ume ka ha mechaa usoro ahụ wee bụrụ ndị ahịa MetLife. N'ime otu ihe dị otu a na MetLife, nchịkọta ozi ahịa a gafere ọwa dijitalụ nwere afọ ojuju ndị ahịa dị elu karịa usoro ọdịnala, usoro ndị ọrụ na-eme.
The Nzaghachi Na-emekọrịta Cloud Cloud Ewubere iji nyere ndị ahịa aka ime ụdị orchestration ahịa a. Ihe ikpo okwu a bu ndi gbara ahia gburugburu, na achoputa uzo ndi ahia kachasi nma nke uwa si ejikwa nmekorita di iche-iche ha ma nye ndi ahia ha ahia kwesiri ekwenti, mkpanaka, mmekorita, ngosi na web. Na, ọ na-enye ndị otu azụmaahịa otu, usoro mmekorita iji hazie, mezuo, bulie ma hazie ọtụtụ usoro, usoro mmemme azụmaahịa. Mkparịta ụka Azụmaahịa Ndị Mmekọrịta na-enye ndị na-ere ahịa ikike iji data ha, ụzọ ha, iji nyefee ozi kachasị mkpa nke na-eme ka ndị ahịa tinye aka na ịzụrụ ihe na ndụ.
Tags: brandemail Marketingmarketingozi ahia. ozi-ekeonweahaziri ahia emailahaziri ozinzaghachi
Kyle Christensen bụ VP nke Ahịa Ahịa na Nzaghachi ebe ọ na-ahụ maka ịkwọ ụgbọ ala azụmaahịa na ịhazi maka Responsys Interact Marketing Cloud. N'oge na-adịbeghị anya, Christensen bụ Onye isi nchịkwa ahịa na Ahịa na njikwa na Zuora, bụ ebe ọ na-eduzi ọrụ ahịa ngwaahịa na njikwa niile maka ngwa Z-Billing na ngwa Z-Payments. Tupu Zuora, Christensen bidoro wee gbaa ahịa ngwaahịa maka ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa Salesforce.com, gụnyere Cloud Cloud na Data.com.
Planspot: Na-akwalite na-ere gị Ihe
Sayensị Ahịa ma ọ bụ Nka?